Iinkcukacha zokuqala malunga nembeko ye-20 kunye ne-20 Pro ziye zavezwa | I-Androidsis
Ukucoca iinkcukacha zokuqala malunga neNhlonipho 20 kunye ne-20 Pro
Imbeko khange isishiye neendaba ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Uphawu sele lusishiyile nge-V20, iyafumaneka eSpain, nangona kuye kwakho iindaba ezincinci kwicala lakhe. Kodwa le yinto eza kutshintsha kungekudala, njengoko sinokulindela iifowuni ezimbini kuwe. Imalunga nembeko ye-20 kunye ne-20 Pro. Iimodeli ezimbini eziza kufika kungekudala.
Idatha yokuqala malunga nale Honor 20 kunye ne-20 Pro sele ifikile kuthi. Enkosi kubo sinokufumana umbono wento uphawu oluza kusishiya kulo mba. Ukongeza, umhla wokumiliselwa kwezi fowuni zimbini zintsha zityhilwe.
Kwimeko ye-Honor 20, singalindela a Iphaneli ye-OLED yobungakanani be-intshi eyi-6,1. Inotshi ekwimo yokwehla kwamanzi iya kusetyenziswa kuyo, ukongeza ukudibanisa inzwa yeminwe phantsi kwesikrini. Ubungakanani bebhetri ye-3.650 mAh iya kufakwa kwifowuni. Kubonakala ngathi iya kuba nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza.
Ikhamera iya kuba yenye yamandla kule fowuni. Inzwa yesithathu iya kusetyenziswa, ene-sensor ephambili ye-48 MP, i-angle ebanzi yesibini ye-20 MP kunye nesithathu se-8 MP. Ke indibaniselwano efanayo okanye ephefumlelweyo kule siyibonileyo Uluhlu lweHuawei P30.
Ngokumalunga nomhla wokumiliselwa kwayo, yonke into yalatha kwinto yokuba le Mbeko 20 kunye ne-20 Pro iza kufika ngo-Epreli. Ezi datha zibonisa ukuba iya kuba ngu-Epreli 25 umhla abaya kufika ngawo. Ke kukho ngaphezulu kweeveki ezimbini ngaphezulu kude kufike loo mhla. Ukongeza, amaxabiso anokubakho kolu luhlu abonakalisiwe.
Ngokubhekisele kumaxabiso, i-Honor 20 yayiza kufika kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo, i-RAM kunye nokugcinwa. Ixabiso lelinye lazo liza kuba malunga ne-450 euro Utshintsho. Ngelixa uguqulelo olune-8/256 GB luya kufika ngaphezulu nje kwe-euro ezingama-500. Kuya kufuneka silinde de kube sekupheleni kwenyanga ukubona ukuba ngamaxabiso okugqibela na la.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukucoca iinkcukacha zokuqala malunga neNhlonipho 20 kunye ne-20 Pro
Uyivavanya njani imowudi emnyama kwiGoogle Chrome
Kufuneka wenze ntoni ukuba isicelo asikhuphelwanga kuGoogle Play